Fitaovana fanariana faran'izay avo lenta amin'ny serivisy fanariana vacuum - orinasa mpamokatra fantsom-panafody tsara indrindra any China - fanariana Minghe
Inona no atao hoe Casting Vacuum
Casting vacuum dia fizotran'ny fanariana vy izay alefa amin'ny vy, alatsaka ary hamboarina ao anaty efitrano fantsona. Ny fanariana vacuum dia afaka mampihena ny atin'ny gazy ao anaty metaly ary misoroka ny fitrandrahana vy. Ity fomba ity dia afaka mamokatra filma vy vy mitaky fitakiana tena mitaky fitifirana ary mora tokoa ny manamboatra firaka titanium. Ny fanariana vacuum dia lafo, ary matetika ampiasaina handrarahana alloys sy famoahana kalitao avo miaraka amin'ny tsindry etona avo lenta ary fahaverezan'ny volatilization mora. Ny lasitra dia tsy tokony hisy volatiles.
Ny fanariana vacuum dia mizara roa amin'ny ankapobeny:
fanariana suction vacuum
fanariana maty ho an'ny banga.
Ny fitsipiky ny fanariana fantsona dia ny fampiasana sarimihetsika plastika hanisy tombo-kase ny boaty fasika, ary mampiasa paompy manafoana hivoahana ny rivotra ao anaty lasitra hamorona fahasamihafana eo amin'ny tsindry eo anelanelan'ny anatiny sy ivelan'ny bobongolo, mba hasiana fasika maina mba hamorona ny lavaka takiana. Ny tombony lehibe indrindra amin'ny fanariana fomba V izay tsy mitovy amin'ny fanariana fasika nentim-paharazana dia ny tsy fampiasana adhesives, noho izany dia mampihena ny asan'ny fanodinana fasika, ary ny habetsahan'ny asa-maodely sy ny fanadiovana fasika maloto dia mihena be, ary ny tahan'ny fanarenana ny fasika taloha dia mety hahatratra 95%.
Ny castings novokarin'ny fizotran'ny fanariana fantsom-batana dia manana kalitao tsara, malamalama amboniny, mazava drafitra, habe marina, hamafin'ny fanamiana, ary manitatra amin'ny fomba mahomby ny androm-piainan'ny casting
Raha te-hahita vahaolana fanariana fantsom-bidy mahomby sy haingana ho an'ny filanao fanodinana ianao, dia mety ho safidy mety aminao i Minghe. Miorina amin'ny traikefa lehibe sy ny fahaiza-manao matihanina, ny serivisy fanamboarana fantsom-pako dia azo alaina ho an'ny prototypes sy ny famokarana famoahana ambany hatramin'ny avo. Miara-miasa amin'i Minghe, ny milina fanamboarana mandroso indrindra dia mamela antsika hamorona faritra sy vokatra fanariana fampiasa amin'ny faran'ny fahombiazana ary mitazona kalitao premium, izay mitsitsy vola sy fotoana ho an'ny mpanjifanay. Fitaovana marobe sy famaranana ambonimbony mamela antsika hanao ny safidy tsara indrindra ho an'ny tetikasanao, ny akora ilaina ao anatin'izany fa tsy voafetra amin'ny vy tsy misy fangarony, aliminioma, varahina, varahina, vy, plastika, sns Polishing, sary hosodoko, sandblasting, plating, anodizing, fonosana vovoka ary serivisy famaranana bebe kokoa dia mitondra kalitao ambonimbony kokoa ho an'ny faritra misy anao. Ny serivisy fanamboarana fantsom-baravarankely dia manome singa matevina maharitra sy mora vidy izay mifanaraka amin'ny famaritana anao amin'ny fiara, fiara, aerospace, elektronika, sakafo, fananganana, fiarovana, ranomasina ary indostria maro kokoa. Haingana handefa ny fanontanianao na handefa ny sarinao mba hahazoanao teny nindramina maimaim-poana amin'ny fotoana fohy.
Ny fizotry ny famoahana vacuum
- Modely: Apetaho amin'ny lovia bobongolo loaka ny lamina. Betsaka ny lavaka vent amin'ny modely. Rehefa apetraka ny banga, ireo lavaka ireo dia manampy amin'ny fametahana mafy ilay sarimihetsika plastika amin'ny lamina.
- Fanamafisana ny sarimihetsika: ny sarimihetsika plastika misy tahan'ny fihenam-bidy avo sy ny tahan'ny fihenan'ny plastika avo dia hafanaina sy halefaka amin'ny fanafanana. Ny hafanan'ny fanafanana dia eo anelanelan'ny 80 sy 120 ° C.
- Famolavolana horonantsary: ​​Sarony amin'ny ambonin'ny modely ilay sarimihetsika malemy, amin'ny alàlan'ny lavaka amin'ny rivotra, eo ambanin'ny herin'ny fantsom-panafody 200 ~ 400mmHg, ataovy akaiky ny velaran'ny modely ilay sarimihetsika.
- Apetaho ny boaty fasika: Aorian'ny famafazana ny loko sy ny fanamainana (tsy ilaina ny fizotrany) dia ataovy eo amin'ilay maodely rakotra sarimihetsika ilay boaty fasika manokana.
- Fandefasana sy fikitihana: Manampia fasika maina miaraka amina fahombiazana feno famenoana sy haben'ny zana-kazo 100-200 ao anaty boaty fasika, ary avy eo manao micro-vibration mba hahatonga ny fasika ho matevina kokoa.
- bobongolo manarona: sokafy ny kaopy sprue, alaharo ny velaran'ny sosona fasika, ary rakofana sarimihetsika plastika hanidy ny boaty fasika.
- Fanesorana ny bobongolo: esorina ny tavoahangy ary hamafisina ny bobongolo noho ny tsindry avy amin'ny atmosfera miaraka amin'ny alàlan'ny sarimihetsika manarona ny velaran'ny tavoahangy. Rehefa esorina ny bobongolo dia avoaka ny banga amin'ny boaty faneriterena ratsy hamoahana ny hery adsorption ny modely amin'ny sarimihetsika, ary avy eo esorina ny boaty ambony hamenoana bobongolo.
- Fampidinana boaty mihidy: Alohan'ny hanidiana ny boaty, ny vy fototra sy ny hatsiaka dia azo ampidinina arakaraka ny fepetra takiana amin'ny fizotrany, ary ny boaty ambony sy ambany dia azo ampifangaroina mba hamoronana bobongolo fanariana miaraka amina riser miraraka sy lavaka, araraka ao fanjakana banga.
- Avy ao anaty boaty sy fasika latsaka: aorian'ny fotoana fampangatsiahana mety dia nofoanana ny banga ary averina amin'ny laoniny ny tsindry mahazatra, ka mivoaka ny fasika mikoriana maimaimpoana ary mamonjy famafazana madio tsy misy vongan-fasika sy fasika mekanika. Ny fasika dia azo ampiasaina indray aorian'ny fampangatsiahana.
Karazan-tsarimihetsika famokarana karazany samihafa amin'ny famoahana vacuum
3. Film Forming ▶
4. Ataovy ny boaty fasika▶
6.Saky ny boaty▶
9. Casting mitohy mahomby▶
10. Vacuum fanariana milina▶
11. Vacuum fanariana milina▶
12. Rafitra banga▶
Ny fanadihadiana momba ny tranga Minghe momba ny fandefasana vacuum
Safidio ny mpamatsy vacuum tsara indrindra
Amin'izao fotoana izao, ny ampahany amin'ny fanariana fantsom-pako dia aondrana any Amerika, Kanada, Aostralia, Royaume-Uni, Alemana, France, Afrika atsimo, ary firenena maro hafa manerantany. Izahay dia ISO9001-2015 voasoratra anarana ary voamarin'ny SGS ihany koa.
Ny serivisy fanamboarana fantsom-baravarana mahazatra dia manome casting maharitra sy mora vidy izay mifanaraka amin'ny famaritana anao amin'ny fiara, fiara, aerospace, elektronika, sakafo, fananganana, fiarovana, ranomasina, ary indostria maro kokoa. Haingana handefa ny fanontanianao na handefa ny sarinao mba hahazoana teny maimaim-poana amin'ny fotoana fohy indrindra. Mifandraisa aminay na mailaka sales@hmminghe.com hijerena ny fomba ahafahan'ny olonay, ny fitaovana ary ny fampitaovana mitondra kalitao tsara indrindra amin'ny vidiny tsara indrindra ho an'ny tetik'asa fanariana fantsonao.